Home XIRIIRKA IYO GUURKA 6 Waxyaabood Oo Haweenku Jecelyihiin Inay Ka Helaan Raggooda
Waxaa jiraan waxyaabo ay haweenku jecelyihiin inay ka helaan raggooda. Waxyaabahaas ayaa sidoo kale muhiim u ah guurkaaga iyo haddii aad rabtid in xaaskaaga ay aad kuu jeclaato.
Waa kuwaan 6 waxyaabood oo dumarku jecelyihiin in loo sameeyo.
In la dhageysto
Haweeney kasta waxay ninkeeda ka rabtaa inuu noqdo mid si wanaagsan u dhageysta; waxay dooneysaa in warkeeda iyo codkeeda la maqlo. Waxay dareentaa jacayl iyo qadarin marka la dhageysto.
In la qadariyo
Haweenka waxay rabaan in sidoo kale la qadariyo; waxay raggooda ka rabaan inay qiimeeyaan wax kasta oo ay sameeyaan. Way dhaawacaysaa in haweeneyda ay qadariso isla markaana ay taageerto ninkeeda oo aanan loo muujin qadarin taas badalkeeda ah.
In loola dhaqmo sida qofka ugu muhiimsan dunida
Haweenka waxay rabaan in mudnaan la siiyo; waxay rabaan inay kuu noqdaan qofka kuugu muhiimsan caalamka. Waxay rabaan in raggooda ay ula dhaqmaan una koolkooliyaan sidii boqorad.
In rabitaan loo muujiyo
Haweeneyda waxay dareenta qurux marka uu ninkeeda tusiyo rabitaan. Haweeney kasta waxay ninkeeda ka rabtaa inuu raboodo isla markaana u arko mid qurux badan, kalgacayl leh oo aanan caadi ahayn. Taasi waxay sare u qaadeysaa kalsoonideeda.
Inaad noqoto mid kalgacayl leh
Dabcan waxay kaa rabtaa inaad noqoto mid kalgacayl leh oo jacaylka wax ka yaqaan, in la koolkooliyo isla markaana kalgacayl loo muujiyo isla markaana si wanaagsan loola dhaqmo. Haweeneyda waxay ka fileysaa ninkeeda inuu noqdo mid kalgacayl leh isla markaana uu jeclaado.
Tusi inaad la soctid xaaladdeeda
Haweenka waxay rabaan xaaladdooda lala socdo; waxay kaa rabtaa inaad waxyaabaha qaar u sheegtid, waxay kaa dooneysaa inaad usheegtid qaabka timaha ay hagaagsatay, labiskeeda iyo wax kasta, inaad usheegtid micnaheeda ayaa ah inaad la soctid xaaladdeeda.
Haweeneyda lixdaan waxyaabood ayay ka fileysaa ninkeeda; ma sheegi karto balse way kaa fileysaa.
Previous articleThis is what happens to your body if you eat raw onions daily
Next articleLixdaan Waxyaabood Haweeneyda Aad Ku Aragto Waxay Ula Jeedaa ‘Waanku Jeclahay’
Sida la isku jecleysiiyo Gabar… 4-taan qaab ee muhiimka ah xasuusnow...